अब सार्वजनिक यातायात पनि खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/अब सार्वजनिक यातायात पनि खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी !
काठमाडौं । सरकारले दुई जनासम्म यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई जनासम्म यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिनेमा सकरात्मक देखिएको हो । तर, निर्णय भने भैसकेको छैन । यसबारे छलफल गर्न कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) लाई जिम्मा दिइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
केहि दिन अघि ट्याक्सी चलाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै राजधानीमा केहीदिन अघि ट्याक्सी चालकहरुले आन्दोलन गरे। हातमुख जोड्ने पेशा लामो समय बन्द हुँदा उठीबास लाग्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले सरकारसंग ट्याक्सी चलाउने अनुमति मागेका थिए ।
साथै, यस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे पनि गृहकार्य गर्ने जिम्मा सीसीएमसीलाई दिइएको छ । यातायात व्यवसायी लगायत सरोकारबाला पक्षसँग यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले छलफल गरेर सीसीएमसीमा मोडालिटी पेश गर्ने र त्यसअनुसार थप निर्णय हुने बताइएको छ । सरकारले विकल्प नखोजेर लकडाउनको अवधि मात्र बढाएको भन्दै ब्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना नगर्दा काठमाडौं उपत्यकामा जोखिम बढेको भन्दै कडाइ गर्ने निर्देशन दिएका छन् ।
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सप्तरीमा चार हजार हेक्टर धानबाली डुबानमा
‘कोरोना भाइरस जर्मनीको लागि अझै ठूलो खतरा’